Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Dalka Koonfur Afrika | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Dalka Koonfur Afrika
Muqdisho (SNTV) Abaaro 7:00 fiidnimo ee xalay saacada Koonfur Afrika ayaa Kooxdaan burcada ah waxay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaali ah oo ku taala deegaanka Zonkizizwe oo qiyaastii 35 km ka xigta dhinaca Koonfur magaalada Johannesburg.
Kooxda Burcada ah ayaa marka ay galeen goobta ganacsiga waxaa ay toogteen mid ka mid ah dhalinyaradii halkaasi joogay oo lagu magacaabayay Qadar Maxamed Nuur oo ku dhax jiray goobta dadka macaamiisha ah lacagaha looga qaado kadibna waxaa ay halkaasi ka qaateen lacago iyo kaararka telfoonada lagu shubto iyo sidoo kale telfoonada ay isticmaalaayeen dhalinyarada dukaankaas ka shaqeyneysay sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Muqtaar Cabdulaahi Xasan oo dukaanka ka shaqeynayay.
Ciidamada Police-ka ayaa goobta yimid saacad kadib markii ay kooxda burcada ah goobta ka baxsadeen waxaana halkaasi ay ka bilaabeen baaritaano la xariira sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxda falkaan geystay,sargaalka madaxda ka ah saldhiga police-ka ee xafaadaasi oo warbaahinta qaranka ay kula hadashay goobta ayaa ka kaabsaday in uu wax faahfaahin ka bixiyo dhacdooyinka soo laab laabanaya ee ka dhaca deegaankaasi.
Inkastoo qofna aan saacadiisa la dhaafineynin hadana waa lama huraan ganacsatada in ay ka gaashaantaan falalka ugaarsiga ah oo ay sameynayaan kooxaha burcada ah.
Iidle aadan Colaad oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in ganacsatada ay bilaabeen in goobahooda ganacsiga ay ku xeraan muraayadaha aan xabada Karin si loo badbaadiyo nafta dhalinyarada ka shaqeysa halkaasi.
Alle ha u naxariisto Marxuum Qadar Maxamed Nuur ayaa waxaa lagu aasaya qabuuraha muslimiinta ee magaalada Johannesburg galinka dambe ee maanta.
Previous articleWafdi uu hoggaaminayo Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Tamarta & Kheyraadka Biyaha oo Shir uga qeybgalaya Kuwait
Next articleGuddiga Kheyraadka Biyaha Aqalka sare iyo Xubno ka socda M/Goboleedyada oo ka shiray sharciga Keyraadka Biyaha dalka